Kenya oo u yeertay Safiirkeedii Soomaaliya, islamarkaana dalka ka saartay Safiirkii Soomaaliya - WardheerNews
Kenya oo u yeertay Safiirkeedii Soomaaliya, islamarkaana dalka ka saartay Safiirkii Soomaaliya
Nairobi -Kenya (WDN)- Warqad ka soo baxday Dowladda Kenya bishan Feb 16, ayaa lagu sheegay in Dowladda Kenya ay u yeertay Safiirkeedii u fadhiyay Soomaaliya Amb Lucas Tumbo, islamarkaana ka codsatay Safiirka Soomaaliya in uu Kenya ka baxo.
Warqad ay cadho badani ka muuqato, oo ka baxsan qaabka xidhiidhka diblomaasiyadda, ayaa Xoghayaha Joogtada ah, ee Wasaaradda Arimaha Dibadda Kenya Md. Macharia Kamau,ku sheegay in “ Dowladda Soomaaliya ay u dhaqantay si ka baxsan nidaamka casriga ah ee Dowladduhu u shaqeeyaan oo ay ka muuqato in ay aanay gaadhin heer Dowlad.”
Amb Lucas Tumbo
Kenya ayaa arinkan la soo noqoshada Safiirkeeda Soomaaliya kaga jawabaysa , iyada oo bishan Feb 7, Soomaaliya ay ku qabatay magaalada London ee dalka Ingiriiska shir shirkadaha Shiidaalka ee aduunka loo qabtay, kaasi oo looga gol lahaa soo bandhiga iyo suuq geynta Shiidaalka Soomaaliya ku jira.
Kenya ayaa ku sheegtay warqadaasi in dhulka badda ee wali uu ka taagan yahay muranku , islamarkaana ay ka socota dacwadda Maxkamadda Aduunka, aysan Soomaaliya sheegan karin, shiidaalna ka baari Karin.
Md. Macharia Kamau ayaa sheegay in “ in Soomaaliya si qeyr masuulnimo ah (carelessness) iskaga indho tirtay nidaamka iyo qaabka loo maareeyo dhulka uu muranku ka jiro (boundary disputes).
Soomaaiya wali wax jawaab ah kama soo saarin hadalka iyo eedeynta culus ee Kenya u soo jeedisay,